सात घन्टा लामो शल्य,क्रियापछि बाबुको आन्द्रा छोराको पेटमा राखेर ब, चाइयो,आठ चिकित्सक र २४ जना नर्सको एउटा टोली खटिएको थियो – Ap Nepal
सात घन्टा लामो शल्य,क्रियापछि बाबुको आन्द्रा छोराको पेटमा राखेर ब, चाइयो,आठ चिकित्सक र २४ जना नर्सको एउटा टोली खटिएको थियो
January 7, 2022 351
नयाँ दिल्ली-चेन्नइका एक बाबुले आफ्नो एउटा सानो आन्द्रा दिएर छोरालाई बचाएका छन् । सात घन्टा लामो शल्यक्रियापछि बाबुको आन्द्रा छोराको पेटमा सफल प्रत्यारोपण गरिएको हो । शल्यक्रिया गर्न आठ चिकित्सक र २४ जना नर्सको एउटा टोली खटिएको थियो ।
निरन्तर वान्ता गर्न थालेपछि गुहान नाम गरेका ती बालकलाई तीन महिनाअघि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । बालकको सानो आन्द्रा बेरिएको र रक्तनलीको प्रवाह रोकिएको उपचारको क्रममा थाहा भएको थियो ।सम्पूर्ण कोषहरु मरेकोले आन्द्राले काम गर्न छोडेको थियो । आन्द्राले काम नगरेपछि बालकले पाउनु पर्ने पर्याप्त पोषण तत्व प्राप्त गर्न सकेका थिएनन्, जसका कारण उनको जीवन नै जोखिममा परेको थियो ।
छोरालाई बचाउन उनको परिवारले सानो आन्द्रा काटेर नयाँ आन्द्रा प्रत्यारोपण गर्न तयार भएको थियो ।उनमा देखिएको समस्यालाई चिकित्सकीय भाषामा भोल्भुलस भनिन्छ ।
एक हजारमा दुई जनामा यस्तो समस्या देखिने बालकको उपचारमा संलग्न चिकित्सकमध्येका एक डा। नरेश सानमुगामको भनाई छ ।-ओएसनेपालबाट।
Prevसुरज र गौरीशाको पहिलो भेटमै चल्यो रुवा, बासी ! अब के यो जोडी जम्छ होला त ? ( भि, डियो सहित हेर्नुहोस )
Nextअब लाइसेन्सको ट्रायलमा परीक्षार्थीहरूको लागि यस्तो व्यवस्था
ह्वात्तै बढ्यो सुनको मुल्य , तोलाको यसरी हुदै छ कारोवार ।
एक युवतीले रविलाई अस्पतालमा दे’खेपछि रुँदै भनिन्, “रवी दाइ तपाँई नहुनु भएको भए मैले आमा र दिदि पनि भन्न पाउने थिइनँ” (भिडियो सहित)